Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafaman
Tuesday, 26 December 2017 10:53
Finfinnee, Mudde 17, 2010 Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafamuusaanii Biiroon Fayyaa Naannichaa beeksise.
Magaalonni tatamsa’inni isaa keessatti hammaate fi adda baafaman 10 ta’uusaanii biiruchi beeksiseera.
Hogganaan biiruchaa Doktar Darajjee Dhugumaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti magaalonni kunniin tatamsa’inni vaayirasii isaanii dhibbantaa 8 ol sadarkaa itti qaqqabe akka jiru biiruchi buufata keenya beeksiseera.
Magaalota qorannuchaan adda baafaman keessas Nagallee Booranaa, Adaamaa, Naqamtee, Moojoo, Jimmaa fi Amboon keessatti argamu.
Magaalota kanneen keessatti hammi tatamsa’ina isaa olka’uu isaaf ammoo akka sababaatti kan eeraman keessaa fi qorannuchi kan mirkaneesse iddoowwan araadaa babal’achuu, hojiin hubannoo qabsiisuu sadarkaa guutumaan guutuutti jedhamuun hojjatamuu hafuu, barattoonni dhaabbilee barnootaa keessaa ofiisaanii araadaaf saaxiluu isaanii, fi qooda fudhattoonnis hojii sirrii hojjachuu dadhabuunsaanii adda dureen kan eeramanidha.
Magaalota kanneenittis qaamoleen hawaasaa saaxilamoo ta’an adda baafamaniiru.
Keessumaa dargaggoonnii fi dubartoonni iddoo adda-duree kan qabatan ta’us, kanneen kaanis adda baafamuu isaanii Doktar Darajjeen himaniiru.
Naannichi tatamsa’ina vaayirasichaa hir’isuuf magaalota 64 keessatti hojiisaa kan hojjatu ta’us, magaalota kanneen keessatti garuu xiyyeeffannoo addaan hojjachuuf sochii jalqabuusaa biiruchi beeksiseera.
Magaalota kanneen keessatti hojii hojjatame baatii lama lamaan gamaggamuurra darbee magaalotaaf ogeeyyii fayyaa olaanoo bobbaasuu fi qorannoo dhiigaa geggeessuuf galteewwan bal’inaan rabsuuf tarsiimoon ba’eera.
Mootummaa Ameerikaa waliin tumsuunis ogeeyyiin fayyaa 120 magaalota kanneen keessatti bobba’uuf akka jedhan Doktar Darajjeen himaniiru.
Kana malees, hojileen ogeeyyii fayyaa dabalataa leenjisuu fi fandoota kaan barbaaduu hojjatamaa jiru.
Hojiiwwan biiruchi hojjatu malee dhaabbileen barnootaas gahee mataa isaanii ba’achuu akka qaban biiruchi hubachiiseera.
Naannolee tatamsa’inni HIV keessatti ol ka’e fi dhibee kanaan waggaa waggaan namni hedduu keessaatti du’u keessaa Naannoon Oromiyaa tokkodha.
Naannicha keessa namoonni kuma 203 vaayirasicha waliin jiraataa kan jiran yoo ta’u, waggaa waggaan namoonni 5,200 ol vaayirasichaan akka haaraatti qabamu.
Akkasumas namoonni kuma 1 ol dhibee kanaan waggaa waggaan lubbuusaanii dhabu. Zufaan Kaasaahuntu gabaase.
More in this category: « Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti ‘gaazii’ baayoo misoomsuufi Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruuf hojjetamaa jira »
Torbe Kana 51372
Ji'a Kana 91613
01/05/07 irraa eggalee 8190768